Madaxweynaha Somaliland oo dalka ku soo guryo-noqday,kana hadlay shirkii ay ka qeyb galeen | Somaliland.Org
Madaxweynaha Somaliland oo dalka ku soo guryo-noqday,kana hadlay shirkii ay ka qeyb galeen
December 18, 2012	“Mustaqbalka marka ay timaado si maamuus leh u wada hadalo ayaanu ku heshiinay”
Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa galabta ku soo guryo-noqday dalka ka dib markii wefti balaadhan oo uu Hoggaaminayay ay dalka Jabuuti kaga qeyb galeen munaasibad lagu xusayay sanad guurada 40-aad ee ka soo wareegtay qoraalka Afsoomaaliga.
Madaxweyne Siilaanyo oo galabta ka soo degay madaarka Hargeysa ee Cigaal International Airport, halkaasi oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland Md. C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda Md. C/Raxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), Guddoomiyaha Xisbiga talladda haya ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, Xubno ka mid ah Golaha Wasiirrada iyo Xildhibaano ka tirsan Goleyaasha Baarlaanka ee Wakiiladda iyo Guurtidda.
Madaxweynaha oo qolka nasashadda ee madaarka ugu waramayay warfidiyeenka, ayaa ka warbixiyay shirkii ay ka qeyb galeen, waxaanu yidhi “Waxaanu ka soo qab-galay shir lagu xusayay 40- guuraddii ka soo wareegtay qoraalka Afsoomaaliga oo lagu qabtay dalka Jabuuti. Xafladaasi waxay ahayd xaflad si weyn ay u yimaadeen cid allaale iyo cidii danaynaysay afsoomaaliga. Dawladda Jabuuti ayaa marti qaadka lahayd.”
“Waxa halkaasi joogay Madaxweynaha dalkaa Soomaaliya iyo masuul kale oo ka socday wadankaas, waxa joogay masuuliyiin ka socday kililka shanaad Itoobiya. Waxa joogtay Haay’adda PEN ee danaysa afsoomaaliga. Waxa joogay wax allaale wixii daneeya afsoomaaliga taariikhdiisa, qoraalkiisa, hidahiisa iyo dhaqankiisa,”ayuu yidhi Madaxweyne Axmed Siilaanyo.
Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in xafladaasi ahayd mid si weyn loo agaasimay, waxaanu yidhi “Xaflad aad u weyn ayay ahayd si qaaliya loo soo agaasimay, la iskugu yimid. Waxaan jecelahay inaan halkan mahad naq balaadhan uga soo jeediyo Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo dawladiisa oo mar walba aad u daneynayay shirkan qabashadiisa uun ma ahee, mar walba si laxaadle u daneeya bahda u shaqeysa afsoomaaliga, dhaqankiisa iyo Hidahiisa had iyo jeer gacan weyn siiya. Waxaan jecelahay inaan mahad naq u soo jeediyo cidii ka soo qeyb gashay oo dhan. Xafladaasi si weyna waa naloogu soo dhaweeyay xaflad milgo iyo maamuus leh baa halkaasi ka dhacday.”
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii watay waxa uu yidhi “Waxaanu halkaasi kula kulanay Madaxdii ka socotay wadanka Soomaaliya, waxa kale oo aanu kula kulanay dawlada Jabuuti oo aanu wax wanaagsan uun ka wada hadalay. Xaflad baanu u soconay oo ma jirin wax xaajood iyo wada hadal sidaasi ma aanu gelin. Laakiin salaan wanaagsan iyo inaanu nabad-gelyo ku wada noolaano iyo inaanu mustaqbalka marka ay timaado si maamuus leh u wada hadalo ayaanu ku heshiinay.”
Madaxweynuhu waxa uu madaarka salaan sharaf kaga qaatay cutub ka tirsan ciidammadda qaranka Somaliland.
Madaxweynaha waxa ku wehelinayay socdaalkiisa marwadda koowaad ee Somaliland Marwo Aamina-Waris Sh. Maxamed Jirde, Wasiirrada madaxtooyadda, arrimaha dibadda, waxbarashadda iyo Boosaha iyo isgaadhsiinta Somaliland.
Previous PostWasiirka Arrimaha dibadda oo Xukuumadda ka baraxay eedo loogu soo jeediyay doorashadii deegaankaNext Post“Waa in wixii soo baxa ee Haay’adaha doorashadda qaabilsani ay soo saaraan loo hoggaansamo”	Blog